के त्यहाँ घरको कपाल हटाउने उपकरणमा विकिरण छ? शरीरलाई बढी हानि? कपाल हटाउने द्वारा कुनै प्रभाव छैन? मित्रहरू उठ्नुहोस्, यो २०२० के तपाईं अझै पनि अफवाहलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? - टेक्निकल इन्फर्मेशन-शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट कम्प्यूटर टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड
के त्यहाँ घरको कपाल हटाउने उपकरणमा विकिरण छ? शरीरलाई बढी हानि? कपाल हटाउने द्वारा कुनै प्रभाव छैन? मित्रहरू उठ्नुहोस्, २०२० के तपाईं अझै पनि अफवाहलाई विश्वास गर्नुहुन्छ?
समय: 2020-07-31 हिट्स: 3
मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले हालसालका वर्षहरूमा उनीहरूको उपस्थितिमा ध्यान दिन थालेका छन्, र सुन्दरता अब युवती महिलाहरूको पर्यायवाची छैन। जसै सुन्दरताको लागि व्यक्तिहरूको माग बिस्तारै बढ्दै जान्छ, यसले सौन्दर्य उद्योगमा अभूतपूर्व द्रुत विकास ल्याएको छ। ती मध्ये, सौन्दर्य उपकरण र कपाल हटाउने उपकरण सबैभन्दा उल्लेखनीय हो। उदाहरणका लागि कपाल हटाउने उपकरण लिनुहोस्, घर पोर्टेबल कपाल हटाउने उपकरण जनता द्वारा व्यापक रूपमा चिनिन्छ। यो भनाइ जाँदा, लोकप्रियताले समस्या निम्त्याउँछ। घरका कपाल हटाउने उपकरण प्रमुख ई-वाणिज्य खुद्रा प्लेटफार्महरूमा बढी लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ, इन्टरनेटमा कपाल हटाउने उपकरणहरूको बारेमा अधिक र अधिक अफवाहहरू छन्। आज, कपाल हटाउने उपकरणको एक वरिष्ठ अभियंताको रूपमा, म एक व्यापक अफवाह खण्डन गर्न चाहन्छु।
त्यसोभए घरको कपाल हटाउने उपकरणको बारेमा के हल्लाहरू छन्?
अफवाह १: घर प्रयोग कपाल हटाउने उपकरणको विकिरण छ
यो अफवाह हटाउन अघि, म सबैले एक आधारभूत अवधारणा बुझ्नको लागि चाहन्छु, विकिरण भनेको के हो? विकिरणको परिभाषा भनेको एक प्रवाहित माध्यममा पदार्थको प्रवाहबाट उर्जाको स्थानान्तरण हो। एउटा साधारण उदाहरण दिनको लागि, भ्याकुम र हावामा प्रसारण गर्ने सूर्यको प्रकाशको उर्जालाई पनि एक प्रकारको विकिरण भन्न सकिन्छ, र यो फ्लोरोसन्ट बत्ती जस्तो छ जुन हामी प्रत्येक दिन प्रयोग गर्छौं। यी तथाकथित विकिरणहरू आणविक बमद्वारा उत्पादित भन्दा अनिवार्य रूपमा भिन्न छन्। हाम्रो घरको कपाल हटाउने उपकरणहरूमा प्रयोग गरिएको फोटोनहरू सूर्यको प्रकाशमा पर्दा नै जस्तै हुन्। त्यसैले कृपया घरको कपाल हटाउने उपकरणको विकिरणलाई चिन्ता नगर्नुहोस्।
अफवाह 2: घर कपाल हटाउने उपकरण शरीर को लागी अधिक हानिकारक छ
जब मैले यो अफवाह देखेको थिएँ, म त्यसबेला क्रोधित भएको थिएँ र लगभग मेरो कम्प्युटर स्क्रिन भाँचेको थियो। मलाई मेरो उत्साह कम गर्न दिनुहोस् र बिस्तारै आउन दिनुहोस्। घरको कपाल हटाउने उपकरण शरीरको लागि धेरै हानिकारक छ भन्न को लागी, त्यहाँ किन यस्तो टिप्पणी छ मलाई थाहा छैन। ठूला पैमानेमा व्यावसायिक कपाल हटाउने उपकरणको तुलनामा, हाम्रो तरंगदैर्ध्य मध्यम छ, उर्जा त्यति उच्च छैन, र यो मूल रूपमा उर्जा दायरामा छ जहाँ दुखाइ कडा छैन, कपाल हटाउने प्रभाव प्राप्त गर्न सकिन्छ। उपकरण प्रयोग गरे पछि सबैभन्दा क्षति छालामा रातो रातो हुन सक्छ, र यो १-२ दिन भित्रमा कम हुन्छ। यो ठीक रूपमा हो किनकि घरको कपाल हटाउने यन्त्रको उच्च सुरक्षाको कारण यो घर प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अझ बढी, यो भनिन्छ कि कपाल हटाउने उपकरणको प्रयोग पछि मानव शरीरको सामान्य पसीनामा असर पार्नेछ। यहाँ म जोड दिन चाहन्छु कि मानव कपालको कण र पसिना ग्रंथि दुई भिन्न स्थान हो।
अफवाह 3: घर कपाल हटाउने उपकरण को कुनै प्रभाव छैन
सर्वप्रथम, हामीले तपाईंलाई कपाल हटाउने साधनको सिद्धान्त बुझाउनु पर्छ। कपाल हटाउने सिद्धान्त भनेको जैविक ऊतकहरूमा प्रकाशको छनौट थर्मल प्रभाव प्रयोग गर्नु हो। कपालको फोलिकल्स र कपाल शाफ्टमा रहेको मेलानिनले चुनिंदा स्पेक्ट्रममा उर्जा ग्रहण गर्दछ र प्रकाशको उर्जालाई तापमा रूपान्तरण गर्दछ। तापक्रम तीव्र रूपमा बृद्धि भएपछि, यसले कपाल हटाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न कपालको कपाल ऊतकहरू नष्ट गर्दछ।
त्यसोभए कपाल हटाउने उपकरण निश्चित रूपले प्रभावकारी छ, तर किन धेरै व्यक्तिहरू भन्छन् कि कपाल हटाउने प्रभावकारी छैन?
यो कपालको बृद्धि चक्र र उपकरण प्रयोगको फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित छ। कपालको विकास चक्रमा विकास अवधि, अध: पतन अवधि र बाँकी अवधि समावेश छ। विकास अवधिमा, कपालको प्यारेन्ट सेल द्रुत रूपमा विभाजित हुन्छ। यस अवधिमा सब भन्दा अधिक melanin र प्रकाश को लागी उच्च संवेदनशीलता छ। त्यसकारण, लेजर कपाल हटाउने मुख्यतया यस अवधिमा समाप्त हुन्छ, र यो पनि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। अध: पतन अवधिमा, कपाल मैट्रिक्स डिजेनेरेट हुन्छ, कपालको जरा सिक्दछ। कपालको फोलिकल आराम अवधिमा कपालको जराबाट अलग हुन्छ, र कपाल खस्दछ। गिरावट अवधि र सुस्त अवधिको अवधिमा, यो लेजर बत्ती प्रति संवेदनहीन हुन्छ र कपालको फोलिकुल नष्ट गर्दैन।
त्यसैले त्यहाँ घर कपाल हटाउने deivce प्रयोगको लागि अवधि छ, र यो सामान्यतया 5--8 हप्ता पछि स्पष्ट प्रभाव हुनेछ।
म विश्वास गर्दछु कि यी सामग्रीहरू पढे पछि तपाईले हाम्रो घर कपाल हटाउने उपकरणको बारेमा गहिरो समझ हुनुपर्दछ। प्रयास गर्न चाहेको तर हिचकिचाउने साथीले अब कार्य गर्न सक्छ। तपाईको सौन्दर्यका लागि यो अत्यावश्यक छ।
अघिल्लो: सही तरीकाले घर प्रयोग गर्ने कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
अर्को: नोबल कपाल हटाउने उपकरण को उपयोग कसरी चरणहरु को बारे मा